အချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲလို့ရသလား – The Voice Journal
စီမံခန့်ခွဲမှုဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်၊ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အင်မတန်မှကို အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ရင်တောင် စီမံခန့်ခွဲမှု ကောင်းရင်ကောင်းသလို၊ ညံ့ရင်ညံ့သလို ရလဒ်ကကွာခြားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဒီအကြောင်းအရာကို အထူးအလေးထား ပြောလာကြတာ။
အဲဒီလိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါ ငွေကြေး၊ လူ၊ ပစ္စည်း၊ နည်းပညာ စတာတွေကို ထည့်စဉ်းစားရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မဖြစ်မနေပါလာတာကတော့ အချိန်ပဲ။ အချိန်တွေကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲရတယ်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေရေးကြေးရေး စတာတွေအပြင် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုလည်း သေချာသုံးစွဲရတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ အဲဒီလိုအချိန်တွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲဆိုတာကပဲ အောင်မြင်မှုတွေကို အဓိကအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတာပါ။
စီမံခန့်ခွဲတယ်လို့ ပြောနေကြပေမယ့် တကယ်တော့ အချိန်တွေကို ဒီနေ့သိပ်မသုံးဖြစ်လို့ မနက်ဖြန်အတွက် စုထားမယ်၊ ဘဏ်ကိုအပ်ထားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း အချိန်ရှားတဲ့သူတွေက ငွေချေးသလိုချေးမယ်၊ အားနေသူတွေကလည်း သူတို့အချိန်တွေကို ငွေတိုးချေးစားသလိုချေးငှားမယ်၊ အဲဒီလိုတွေမှ လုပ်လို့မရတာ။ အချိန်ဆိုတာက သူ့ဟာသူ လည်ပတ်နေတာပဲ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာက အဲဒီအချိန်တွေမှာ ဘယ်လောက်ရလဒ်ထွက်အောင် အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာပဲ။ အဲဒါကိုပဲ အချိန်စီမံခန့်ခွဲတယ်လို့ ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ရင် စာအုပ်တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ် ဆိုတာတွေလည်း ပြောနေရေးနေကြတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ အချက်(၃)ကိုပဲ ဝေမျှချင်ပါတယ်။
၁။ ငယ်တုန်းမှာ ကိုယ်တိုင်ကတန်ဖိုးထားခဲ့ရင် ကြီးလာတဲ့အခါ လူတကာကလည်း တန်ဖိုးထားလာလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် NGO အလုပ်ဝင်စက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရံဖန်ရံခါ ခရီးတွေထွက်ရဖူးတယ်။ အဲဒီအခါ များသောအားဖြင့် အသုံးများတာက အဝေးပြေးကားတွေပဲပေါ့။ ညဘက်ကို ကားစီး၊ မနက်ကျ ဟိုရောက်၊ အလုပ်လုပ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ထက်ရာထူးကြီးတဲ့ ဆရာတွေကျတော့ ကျွန်တော်သွားတဲ့မြို့တွေကိုပဲ ခရီးထွက်ကြတဲ့အခါ လေယာဉ်ကိုသုံးကြတယ်။ မနက်ပိုင်း ဖလိုက်နဲ့သွား၊ ဟိုကိုရောက်၊ အလုပ်လုပ်၊ ပြီးတော့ ညနေပဲပြန်လာ။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ပေါ့၊ ကျွန်တော်က ဘတ်စ်ကားစီးရတယ်၊ သူကျ လေယာဉ်နဲ့။ တကယ်တမ်းကျတော့ အချိန်ရဲ့တန်ဖိုး ကွာခြားတာကြောင့်ပဲ။ ကျွန်တော်က အချိန်ခြောက်နာရီလောက်ကို ကားပေါ်မှာသုံးလိုက်လို့ ဘာမှဖြစ်မသွားပေမယ့် ဆရာတွေရဲ့ အချိန်ခြောက်နာရီကျတော့ သိပ်တန်ဖိုးရှိတယ်။ ကားပေါ်မှာ အိပ်နေရင်းကုန်သွားရမှာ နှမြောစရာကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်ထက် လေယာဉ်ခက တန်ဖိုးပိုများနေတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်က အချိန်ကိုသုံးလိုက်တယ်။ ဆရာ့ရဲ့အချိန်ကျတော့ တန်ဖိုးကြီးနေတဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုပြီး အချိန်ကို Save လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလိုငွေသုံးဖို့ကိုလည်း ဘယ်သူကမှ နှမြောမနေဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဆရာ့ရဲ့အချိန်တွေ သိပ်တန်ဖိုးရှိတာသိနေတာကိုး။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်လေးကနေ တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ အချိန်တွေသိပ်ပေါတယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်တိုင်ကတန်ဖိုးထားပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချမှ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တော်လာမယ်၊ တတ်လာမယ်၊ ထက်မြက်လာမယ်၊ အများအတွက် အလုပ်တွေ ပိုလုပ်လာနိုင်မယ်။
ဒီတော့ လူငယ်ဘ၀က တစ်နာရီနဲ့ လူကြီးဘ၀ တစ်နာရီဟာ တန်ဖိုးချင်းမတူတော့ဘူး။ အကျိုးပြုနိုင်ပုံချင်း မတူတော့ဘူး။ ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ချင်းလည်းကွာသွားပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ကိုယ့်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး ကြိုးစားပါ။ ဒါမှ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်အချိန်တွေကို လူတွေကလည်း တန်ဖိုးလိုက်ထားကြပါလိမ့်မယ်။
၂။ အချိန်မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် အရေးမကြီးဘူးလို့ ဆိုလိုတာပဲ။
ကြည့်ဖူးတဲ့ TED Talk လေးတစ်ခုရှိတယ်။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု အကြောင်းပြောထားတာ။ အဲဒါလေးနားထောင်ရင်း အတွေးထဲ လက်ခနဲဖြစ်သွားတာ တစ်ခုပေါ့။ သိပ်အထူးတဆန်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတာကြားလိုက်မှ ဪ ဟုတ်သားပဲလို့ တွေးမိသွားတာ။ ဘာလဲဆိုတော့ I don’t have time = It is notapriority for me. တဲ့။ ငါ့မှာ အချိန်မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာဟာ တကယ်တော့ အဲဒီကိစ္စဟာ ငါ့အတွက် အရေးမကြီးဘူးလို့ ပြောလိုက်တာပါပဲတဲ့။
တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဟောပြောပွဲတစ်ပွဲ ဖိတ်မယ်ဆိုပါတော့။ ချိန်းထားပြီးသားကိစ္စတစ်ခုနဲ့က တိုက်နေတယ်။ ပွဲအကြောင်းမေးလိုက်တဲ့အခါ လူကလည်းနည်းနည်း၊ အချိန်ကလည်းနည်းနည်း၊ သိပ်ပြီး ပွဲအကြီးမဟုတ်ဘူးထင်တော့ ကျွန်တော်ငြင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားကြည့်၊ အဲဒီပွဲကနေ ကျွန်တော့်ကို ပိုက်ဆံတွေအများကြီးပေးမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပွဲရဲ့ထိရောက်မှုက သိပ်ကြီးမယ်ဆို ကျွန်တော်ဟာ မအားအားအောင်လုပ်မှာပဲ။ အချိန်တွေ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်မှာပဲ။ ဒါကြောင့် မအားဘူးဆိုတာ တကယ်မအားတာ မဟုတ်ဘူး။ အားအောင်လုပ်ရင် ရတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အရေးမကြီးဘူးထင်လို့သာ မအားဘူးလို့ ပြောနေကြတာ။
တချို့က ပရဟိတကို ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ထက် ပိုဦးစားပေးတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ပရဟိတလေးလုပ်ဖို့တောင် မအားပါဘူးတဲ့။ တချို့က မိသားစုကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ တချို့ကျ အိမ်ထောင်ဖက်မပြောနဲ့ ချစ်သူရည်းစားကိုတောင် အချိန်ပေးဂရုစိုက်ကြတယ်။ ဘယ်ပေါ်မှာ မူတည်သွားတာလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဘယ်ဟာကို Priority ထားသလဲ (ဦးစားပေးသလဲ) ဆိုတာပဲ။ အချစ်ကိုဦးစားပေးတဲ့သူ၊ မိသားစုကိုဦးစားပေးတဲ့သူ၊ အလုပ်ကိုဦးစားပေးတဲ့သူ၊ အကျိုးအမြတ်ကို ဦးစားပေးတဲ့သူ စသဖြင့် ကွာခြားသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာထက် ကိုယ့်ဦးစားပေးမှုနဲ့ ကိုယ်ပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တန်ဖိုးထားမှုချင်းလည်းမတူဘူးကိုး။ တချို့က ဘ၀အောင်မြင်မှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ တချို့က အများအကျိုးပြုမှု၊ တချို့ကတော့ မိသားစုစသဖြင့် ကွာခြားကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တအားကြီး တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်မနေရင် လုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ နောက်ပြီးအချိန်အခါပေါ်လည်း မူတည်သေးတယ်။ ဥပမာ- နိုင်ငံခြားမှာ ပညာတော်သင်ဆုရလို့ ကျောင်းသွားတက်နေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည် ခဏခဏပြန်လာပြီး ပရဟိတလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့အချစ်ကိစ္စ၊ မိသားစုကိစ္စတွေလည်း လစ်ဟင်းသွားမှာပဲ။ လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်စမှာလည်း ဒီလိုပဲ။ အချိန်တော်တော်များများကို ဒီထဲမှာ ရင်းနှီးလိုက်ရတယ်။ အာရုံစိုက်ကြိုးစားရတယ်။ အဲဒီလိုအခါတွေမှာ Balance လုပ်ရသိပ်ခက်တယ်။ ကျွန်တော့်သဘောအရဆို Balance လည်းလုပ်မနေသင့်ဘူး။ Concentration အပြည့်နဲ့ ကြိုးစားသင့်တယ်။ ဒီအတိုင်းပရဟိတလုပ်တာထက် ပညာပြည့်ဝပြီးမှသာ လုပ်မယ်ဆို အကျိုးပြုနိုင်မှုချင်းက တခြားစီဖြစ်သွားမယ်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားရင် မိသားစုကို အချိန်တင်မကဘဲ ငွေကြေးပိုင်းမှာပါ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တော့မှာလေ။
ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်အရာကကိုယ့်အတွက် Priority ဖြစ်သင့်လဲဆိုတာကို ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ အချိန်အခါပေါ်လိုက်ပြီး အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်။
၃။ ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်သလဲထက် ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်သွားသလဲကို ပိုအာရုံစိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့မှာက အလုပ်ချိန်ဆိုတာကြီးကို တော်တော်လေး အာရုံစိုက်ကြတုန်း။ ရုံးဆင်းချိန် တက်ချိန်မှန်ရမယ်ပေါ့။ မမှန်ရင် ဒဏ်တပ်ကြတယ်။ သတိပေးကြတယ်။ တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်၊ ရုံးတက်ချိန်တော့မှန်ပါရဲ့၊ ရုံးမှာ အလုပ်မလုပ်တဲ့သူနဲ့ နည်းနည်းတော့ နောက်ကျပေမယ့် အလုပ်တွေပြီးတဲ့ဝန်ထမ်း၊ ဘယ်သူက ပိုအဆင်ပြေသလဲ။ တချို့အလုပ်တွေဆို ရုံးမှာထိုင်လုပ်နေမှရတာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပရိုပီသမှုက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပြီး အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားမှရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲကြောင့် ဒီလိုတွေ စည်းကမ်းလုပ်နေကြတာပေါ့။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးထဲမှာ ငါ ဘယ်နှနာရီ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲ ခေါင်းထဲမှာ တွေးနေတတ်ကြပြီး အဲဒီအလုပ်ချိန်အတွင်း ဘယ်လောက်အလုပ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ မစဉ်းစားမိတော့ဘူး၊ အလေးမထားမိတော့ဘူး ဖြစ်လာကြတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတဲ့ပေတံက Result ဖြစ်တယ်။ Working hours မဟုတ်ဘူး။ ငါ ဘယ်လောက်တောင် ကြိုးစားခဲ့တာလေဆိုတာတွေက အရာမထင်ဘူး။ ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲကသာ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမှတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mindset တွေကို ပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ လေးစားရတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပြောသလိုပြောရရင် အဖြစ်လုပ်မှာလား၊ အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်မှာလားကွဲပြားနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တစ်ခါက ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီ Nissan အရှုံးပေါ်တော့ မဟာဗျူဟာမြောက်ခြေလှမ်းအဖြစ် Renault ကားကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။ Renault-Nissan Alliance ဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီအခါ Nissan ကို ဦးဆောင်ဖို့အတွက် Chief Operation Officer (COO) အသစ်အဖြစ် Renault က Carlos Ghosn ဆိုတဲ့သူ ရောက်လာပါတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ယေဘုယျဆန်တဲ့ စကားမျိုးမပြောဘဲ Nissan Revival Plan ဆိုပြီး ချပြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သုံးနှစ်အတွင်း လက်ရှိတင်နေတဲ့အကြွေးရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျေစေရမယ်ဆိုတာအပါအဝင် တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်သုံးခုပေးခဲ့တယ်၊ ဖြစ်မလာခဲ့ရင် အလုပ်ကနုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိမျိုးပေးပြီးမှ ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ထက်မြက်တဲ့လူဖြစ်လို့ သုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာ တကယ်လည်း အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ဂျပန်မီဒီယာတွေက ကင်ပွန်းတပ်ပါတယ်၊ Mr. Seven Eleven ပါတဲ့။ မနက် ၇ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထက် တောက်လျှောက် အလုပ်လုပ်တတ်သူမို့ပါ။
စက္ကန့်တိုင်း၊ စက္ကန့်တိုင်းဟာ အရေးပါနေတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ၇-၁၁ လား၊ ၉-၁၂ လား၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလိုကို ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရယ်လို့ လောက်လောက်လားလား ရှိမနေဘူးလား၊ တစ်ခါလောက် သတိထားကြည့်ကြစေချင်တယ်။
ပြောခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ တစ်နေ့ကို အချိန် ၂၄ နာရီစီပဲရပါတယ်။ သမ္မတမို့လို့ ပိုမရသလို၊ ကုန်တင်ကုန်ချလောက် လုပ်နေရတာပဲဆိုပြီးလည်း လျှော့မပေးပါဘူး။ အားလုံး တစ်ပြေးညီပဲရနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာကပဲ ကိုယ် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Next story OIC
Previous story အမွန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း